सानो-क्षमता मर्सिडीज बेन्ज Sprinter क्लासिक, बहुमुखी, उच्च प्रदर्शन वाहक, जर्मन कम्पनी डेम्लर-बेन्ज उत्पादित 1995 देखि वर्तमान समय।
कार को पाङ्ग्रा आधार चार भिन्न मा प्रस्तुत छ, छत उचाइ तीन सेटिङहरू बीच फरक हुन्छ। चेसिस को रियर धुरा, Uni-दिशात्मक वा दोहरी पाङ्ग्रा संग सुसज्जित छ मिसिन क्षमता को दर्जा अनुसार, फरक पनि छ। 3050 किलो - ओसारपसार गर्न मर्सिडीज बेन्ज Sprinter क्लासिक गर्न सक्ने अधिकतम वजन।
आज, निर्माता निम्न परिमार्जनहरू उत्पादन:
यात्री मिनिबस (ट्याक्सी) 16 सिट;
22 सिट मा सहरी यात्री मिनिबस;
flaps संग कार्गो वैन;
एक भली भांति बंद hardtops संग रेफ्रिजरेटर;
विशेष वाहन: एम्बुलेन्स, क्रेन, मोबाइल कार्यालय, एक सामान उचाल्ने यंत्र, एक प्राविधिक कार्यशाला संग एक टो ट्रक;
पाङ्ग्रा ड्राइभ संस्करण, सबै-भू-भाग वाहन।
निःशुल्क बिक्री - प्रयोगकर्ता को विवेकमा मर्सिडीज बेन्ज Sprinter क्लासिक चेसिस dokomplektatsii। कम्पनी "डेम्लर-बेन्ज" सबै आवश्यक भागहरु र उपकरण प्रदान गर्दछ।
मर्सिडीज बेन्ज Sprinter क्लासिक: प्राविधिक विनिर्देशों
वाहन लम्बाइ - 5261 मिमी;
उचाइ - 2415 मिमी;
चौडाई - 1993 मिमी;
इन्धन ट्यांक क्षमता - 68 लिटर;
लोड - 1560 3050 किलो गर्न;
कुल वजन - 2.5 4.6 टन देखि।
मोडेल-बेन्ज मर्सिडीज Sprinter क्लासिक को फराकिलोकालागि दायरामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यात्री वैन लगातार दर संग चिल्लो कार्य सुनिश्चित, राम्ररी सन्तुलित निलम्बन छ। ट्रक चेसिस थप कठोर, superreliable एकाइहरु सुसज्जित।
कार सबैभन्दा minibuses सिद्धान्त लागि इष्टतम लागि डिजाइन गरिएको छ। यो polukapotnaya लेआउट रेखाचित्र असर शरीर, पछिल्लो-पाङ्ग्रा ड्राइव, इन्जिन को अनुदैर्ध्य स्थिति।
को बन्द प्रकार "Sprinter" भ्यान उपयोगी मात्रा7घन मीटर छोटो आधार शरीर र मानक उचाइ को छत छ। शीर्ष लामो-आधार 13.4 घन मीटर accommodates। शरीर मा सबैभन्दा लामो पूर्ण लोड संग लोड गर्न सकिँदैन चार मीटर बोर्ड वा चार यूरो Pallets।
hinged पछिल्लो-ढोका र स्लाइड छेउमा तपाईँले प्रयोग बुट गर्न अनुमति दिन्छ एक फोर्कलिफ्ट ट्रक, समय बचत को मामला मा धेरै सुविधाजनक छ जो। मर्सिडीज बेन्ज Sprinter क्लासिक, जो अनुमति तपाईं एक निर्माण साइट मा मिसिन प्रयोग गर्न विशेषताहरु, सफलतापूर्वक डम्प ट्रक वा flatbed ट्रक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। कस-उपयुक्त बोर्डहरू यस्तो सिमेन्ट, बालुवा, प्लास्टर रूपमा, थोक कार्गो ओसारपसार गर्ने मौका प्रदान गर्न।
यात्री परिमार्जनहरू बीच च्याम्पियनशिप राख्छ मर्सिडीज बेन्ज Sprinter क्लासिक 411 cdi, धेरै लामो wheelbase (4025 मिमी) र 22 ठाउँमा लागि एक विशाल भित्री छ। यी मिसिन अधिकतम सुविधा प्रदान लामो दूरी भन्दा ग्राहकहरु ओसारपसार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
मर्सिडीज बेन्ज Sprinter क्लासिक भ्यान परिमार्जन रूपमा रिकभरी वाहन प्रयोग। यो फिर्ता मा पाइपलाइन र अन्य यांत्रिक उपकरण संग एक कार्यशाला छ। डबल सानो घर सात मान्छे को एक टीम स्थित छ।
मर्सिडीज बेन्ज Sprinter XXL परिमार्जनका
यस्तो ट्याक्सी रूपमा सार्वजनिक परिवहन को सबै भन्दा साधारण फारम। 7.200 मिमी को एक लम्बाइ र 1930 मिमी मिसिन को आन्तरिक स्पेस एक शरीर चौडाई संग शहर सहज अवस्थामा 17 मान्छे TRANSPORTS। शारीरिक खोल एक्स आकारको पार खण्ड को उच्च-बल इस्पात पाइप वेल्डेड। पछाडि प्यानल छत र Bumpers अत्यधिक टिकाउ कार्बन फाइबर बनेको छन्।
छत अन्तर्गत सम्पूर्ण भित्री साथ, सामान लागि ढोका समतल संग सज्जित। राखिएको तल प्यानल वेंटिलेशन deflectors लामो यात्रा बिना गर्न सक्नुहुन्न, र रात दीपक।
सबैभन्दा कार ब्रान्डहरु "Sprinter" सेतो चित्रित र मर्सिडीज बेन्ज Sprinter, सेतो क्लासिक रूपमा कागजातहरू पहिचान छन्। यो चित्रकला यो मोडेल लागि अपनाए, स्वामित्व हुन मानिन्छ।
रंग को एक एकदम व्यापक दायरा - तर, शरीर रंग केहि हुन सक्छ। केवल सूची मा संकेत लेख को एक संकेत संग अर्डर राख्न आवश्यक र कार अनुसार खरीदार को इच्छा मा चित्रित गरिनेछ।
मर्सिडीज बेन्ज Sprinter क्लासिक मोडेल राम्रो महसुस र शहर को व्यस्त thoroughfares मा। को स्टीयरिंग रैक प्रभावकारी संयन्त्र र बूस्टर संग सुसज्जित छ। निर्धक्क भई चाहेअनुसार मोड्न सजिलो microbeads यो संयोजन bottlenecks बित्दै र ट्राफिक को प्रवाह संग राम्रो तरिकाले फिट।
अगाडि निलम्बन, हाइड्रोलिक शक संग बहु-लिंक वसन्त। अगाडि माउन्ट रोल पट्टी रोल पट्टी। पछिल्लो निलम्बन - अर्द्ध-अण्डाकार पात पानीका मुहानहरू मा निलम्बित hypoid ग्रह गियर संग एक कठोर एक्सल। सबै पाङ्ग्रा कुशल डिस्क ब्रेक विकर्ण बाइपास कार्य संग सुसज्जित छन्। पार्किङ ब्रेक पनि हाइड्रोलिक, मजबूत डिजाइन छ।
"Sprinter" संग आधुनिक सुरक्षा प्रणाली दुवै सक्रिय र निष्क्रिय, सुसज्जित छ। मेशिन सिरियल ABS र ABD संग सुसज्जित छ। आपतकालीन शरीर मा inertia पिन मान्छ र आंशिक यो quenches। Polukapotnaya मोटर व्यवस्था किनभने यो केवल कतै जान, इन्जिन एक frontal टकराव मा विकृत किनभने, तर स्थानमा बाँकी सुविधाजनक छ। इन्जिन मा एक धेरै मजबूत प्रभाव आंसू गर्न mounts, र यो तल पर्छ। को सानो घर मा कुनै पनि मामला multikilogram शक्ति एकाइ मा प्राप्त गर्दैन।
आठ टुक्रा को राशि स्थित airbag को भित्री परिधि अनुसार। ती दुई अगाडि छन्, ड्राइभर र अगाडि सीट यात्री सुरक्षा। तीन-बिन्दु आपतकालीन बेल्ट प्रत्येक सिटमा स्थापित, निष्क्रिय सुरक्षा "Sprinter" को समग्र तस्वीर पूरा गर्नुहोस्।
"वोक्सवैगन" -furgon: लोकप्रिय मोडेल को एक समीक्षा
Nysa 522: विनिर्देशों र समीक्षा
आईएल-2715: विनिर्देशों, वर्णन, परिमार्जनहरू
सही सन्तुलन: लोड विशेषताहरु - लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ भएको गाडी को
पार्क कडवा (क्रास्नायार्स्क)। इतिहास, वर्णन, आकर्षण
पर्किन्स Entoni: जीवनी, Filmography
डच मिडफिल्डर Demy डे Zeeuw
तपाईं एक एनालग आवश्यक छैन! "Hilak गुण" यसको अभिप्रेत उद्देश्य को लागि सबै आवश्यकताहरू पूरा।
कसरी स्थिर mussels खाना पकाउनु? कसरी खाना पकाउनु mussels स्थिर पकाएको?
गुप्तचर श्रृंखला "कगार मा महिला": अभिनेता, भूमिकाको, षड्यन्त्र, सारांश